Ndị na-ebugharị ala na ndị na-emepụta ihe - China Slashers & Mowers Manufacturers
Lawn mowers kwesịrị ekwesị maka ala ahịhịa dị larịị na mpaghara ugbo / ịzụ anụ na ala ahịhịa juru na ugwu. A na-ejikarị ha eme ihe maka ahihia ahihia, owuwe ihe ubi nri, nlekọta anụ ụlọ, ịkpụcha ahịhịa, wdg. Can nwere ike ịhọrọ injin mmanụ dizel ma ọ bụ mmanụ ụgbọala dị ka ike Nkọwapụta Nka na ụzụ Ihe Nkọwapụta Nkebi Nkekọ dakọtara kw 4.8 Nwepu CC 196 Mbelata mm mm 60/80/90 / 100 / 120mm nhọrọ Ntuwe ntụ mmụba mm 20-80 ...
Ngwaahịa zuru ezu slasher rotary dị mma maka nhicha na slashing na ohia na ahịhịa, yana ịkwalite ebe ana-azụ anụ ụlọ. Igwe ahụ bụ sayensị na imepụta, na-adịgide adịgide na ọrụ, dị mfe ịrụ ọrụ ma jigide ya, na-agbanwe agbanwe na igbutu elu ma nwee arụmọrụ arụmọrụ dị mma, ha bụ igwe ọrụ ugbo kachasị mma maka ahihia ahihia na ihicha ahihia. Nka na ụzụ nkọwapụta Model Unit SL2-1.2 SL4-1.5 SL4-1.8 Work wide mm 1200 1500 ...
9gb usoro igwe
A na-eji igwe eji eme ihe usoro 9GB maka igho ahihia n'ugbo, oke ohia ma o bu ala ture. Ọ na-arụ ọrụ n'ugwu, mkpọda ma ọ bụ obere ubi. Ọ na-achịkwa ya na traktọ ọkwọ ụgbọala na ọ nwere ezigbo ọrụ arụmọrụ, enwere ike ibuli mower niile site na systerm nke hydraulic mgbe traktọ gafere ihe mgbochi ahụ. Nka na ụzụ nkọwapụta Nka na ụzụ Unit 9GB-1.2 9GB-1.4 9GB-1.6 9GB-1.8 9GB-2.1 Obosara na-arụ ọrụ mm 1200 1400 1600 1800 2100 ...